Best Waves mgbanwe
Best Waves ọnụego mgbanwe ọnụego taa site na netwọk ego ego. Ebe kachasị mma ịzụta ma ọ bụ ire Waves taa.
Best Buy price Waves $ 0.993955 WAVES/BTC 50x
Ahịa ahia kacha mma Waves $ 1.13 WAVES/BTC Hotbit
Ihe kachasị mma Waves ekpebisiri site na nsonaazụ nke ụzọ abụọ ego ego na mgbanwe. Ọnụego mgbanwe ego ego dị ugbu a Waves bụ ego mgbanwe n'etiti ndị azụmaahịa niile. Ihe omuma ego a bu nke e kpere site na nguzozi nke ndi mmadu n’abia. N'ihi ya, Waves ọnụego mgbanwe maka ebe azụmaahịa dị n'ịntanetị dị iche. A na-agbakọ ọnụego kacha mma Waves site na ịtụle ọnụego mgbanwe na mgbanwe ego ego ego niile dị. Mgbe ahụ ị nwere ike were ọnụahịa kachasị mma.
Best Waves obere akpa
Ka 28, 2020 Kachasị mma ịzụta Waves na Ka 28, 2020 Ọnụ ahịa kacha mma Waves na $ sell_pair ụzọ azụmaahịa na $ sell_market ahịa.
Elekere Waves obere akpa bụ nyocha nke ndị nwe ego ego. Mpempe akwụkwọ Crypto bụ mmemme maka ịchekwa ego ego yana ịme ego na ịkwụ ụgwọ maka crypto a. Ejiri akpa kacha mma Waves jiri akara ngosi nke nchekwa na ntụkwasị obi kacha mma. A na-agbakọ azụmaahịa kacha mma ego ego Waves na nkeji oge ọ bụla n'ihi nyocha nke azụmaahịa azụmaahịa zuru oke banyere ire na ịzụta nke ego ego.
Ụlọ ahịa Waves kacha mma
Oke ego Waves ọnụego mgbanwe maka taa bụ 28/05/2020 - egosiri na tebụl azụmahịa niile maka taa. Na tebụl a, ebe egosiri na Waves ego ego ego, ị nwere ike ịhụ nke ọma ọnụahịa nke Waves na nyochaa nke kachasị mma. N'ihi nke a, họrọ nke ị ga - eji agbanwee mgbanwe kacha mma. Ọrụ anyị "ọnụahịa Kachasị mma Waves nke taa 28/05/2020" na-enye gị ohere inyocha ọnụego niile kachasị mma n'ụwa niile na ntanetị. Kacha mma Waves ọnụego ịzụrụ ihe dị n'elu peeji ahụ. A na-egosipụta ọnụego azụmaahịa na dollar.
BTC USDT ETH USD EUR USDN TRY KRW UAH BCH RUB USDC KZT IDR INR Ọzọ ...
Tebụl na-egosi taa ọnụahịa Waves nke ọ bụla site na netwọk ego ego. A gbanwere ọnụego mgbanwe maka ọnụọgụ abụọ abụọ na dollar US.
Coinsbit WAVES/BTC $ 1.08 $ 728 163 -
Coinsbit WAVES/USD $ 1.08 $ 324 181 -
Coinsbit WAVES/ETH $ 1.09 $ 121 408 -
Coinsbit WAVES/EUR $ 1.10 $ 87 747 -
Coinsbit WAVES/RUB $ 1.08 $ 25 207 -
Coinsbit WAVES/UAH $ 1.07 $ 22 632 -
Coinsbit WAVES/KZT $ 1.08 $ 17 271 -
IndoEx WAVES/BTC $ 1.08 $ 481 656 -
IndoEx WAVES/ETH $ 1.08 $ 356 713 -
IndoEx WAVES/USDT $ 1.06 $ 281 083 -
IndoEx WAVES/USDC $ 1.06 $ 231 556 -
IndoEx WAVES/EUR $ 1.07 $ 145 054 -
IndoEx WAVES/USD $ 1.07 $ 114 435 -
P2PB2B WAVES/BTC $ 1.07 $ 1 656 718 -
P2PB2B WAVES/USD $ 1.07 $ 620 989 -
P2PB2B WAVES/USDT $ 1.07 $ 475 173 -
P2PB2B WAVES/ETH $ 1.08 $ 104 711 -
P2PB2B WAVES/USDN $ 1.07 $ 26 473 -
Kraken WAVES/USD $ 1.08 $ 36 280 -
Kraken WAVES/BTC $ 1.08 $ 29 082 -
Kraken WAVES/EUR $ 1.07 $ 20 826 -
Kraken WAVES/ETH $ 1.09 $ 3 188 -
BitUBU WAVES/BTC $ 1.08 $ 854 117 -
BitUBU WAVES/USDT $ 1.08 $ 612 741 -
BitUBU WAVES/ETH $ 1.09 $ 492 252 -
BitUBU WAVES/TRY $ 1.08 $ 1 965 -
WhiteBIT WAVES/BTC $ 1.07 $ 15 136 -
WhiteBIT WAVES/UAH $ 1.08 $ 13 411 -
WhiteBIT WAVES/USDT $ 1.07 $ 11 719 -
WhiteBIT WAVES/RUB $ 1.06 $ 2 087 -
Sistemkoin WAVES/TRY $ 1.08 $ 2 002 592 -
Sistemkoin WAVES/USDT $ 1.08 $ 657 945 -
Sistemkoin WAVES/BTC $ 1.08 $ 647 082 -
Sistemkoin WAVES/ETH $ 1.07 $ 251 680 -
Tidex WAVES/BTC $ 1.07 $ 144 214 -
Tidex WAVES/USDT $ 1.07 $ 122 912 -
Tidex WAVES/USDN $ 1.06 $ 45 375 -
BitMart WAVES/BTC $ 1.07 $ 1 522 079 -
BitMart WAVES/USDT $ 1.07 $ 1 380 963 -
BitMart WAVES/ETH $ 1.07 $ 1 364 779 -
OKEx WAVES/USDT $ 1.08 $ 111 978 -
OKEx WAVES/BTC $ 1.08 $ 8 520 -
OKEx WAVES/ETH $ 1.08 $ 42 -
ProBit Exchange WAVES/KRW $ 1.05 $ 94 609 -
ProBit Exchange WAVES/USDT $ 1.07 $ 15 353 -
ProBit Exchange WAVES/BTC $ 1.07 $ 4 920 -
OKEx Korea WAVES/USDT $ 1.07 - -
OKEx Korea WAVES/ETH $ 1.08 - -
OKEx Korea WAVES/BTC $ 1.07 - -
Bitcoin.com WAVES/BTC $ 1.07 $ 166 316 -
Bitcoin.com WAVES/USDT $ 1.07 $ 258 -
Bitcoin.com WAVES/BCH $ 1.07 $ 0.88 -
Waves Exchange WAVES/USDN $ 1.07 $ 587 103 -
Waves Exchange WAVES/BTC $ 1.07 $ 198 819 -
Waves Exchange WAVES/USDT $ 1.07 $ 187 155 -
Exrates WAVES/BTC $ 1.06 $ 1 816 726 -
Exrates WAVES/USDT $ 1.07 $ 1 009 746 -
Exrates WAVES/USD $ 1.07 $ 962 672 -
CoinEx WAVES/USDT $ 1.07 $ 50 222 -
CoinEx WAVES/BTC $ 1.07 $ 46 900 -
CoinEx WAVES/BCH $ 1.07 $ 16 066 -
YoBit WAVES/BTC $ 1.08 $ 2 526 250 -
YoBit WAVES/USD $ 1.09 $ 562 -
Binance WAVES/BTC $ 1.08 $ 850 065 -
Binance WAVES/USDT $ 1.08 $ 452 614 -
Hotbit WAVES/BTC $ 1.13 $ 47 733 -
Hotbit WAVES/ETH $ 1.06 $ 47 693 -
Gate.io WAVES/USDT $ 1.08 $ 644 -
Gate.io WAVES/BTC $ 1.08 $ 410 -
Bittrex WAVES/BTC $ 1.08 $ 14 535 -
Bittrex WAVES/ETH $ 1.08 $ 1 590 -
Huobi Korea WAVES/USDT $ 1.07 - -
Huobi Korea WAVES/ETH $ 1.07 - -
LATOKEN WAVES/BTC $ 1.06 $ 1 410 -
LATOKEN WAVES/USDT $ 1.07 $ 483 -
VCC Exchange WAVES/BTC $ 1.07 $ 24 981 -
VCC Exchange WAVES/ETH $ 1.08 $ 7 333 -
Huobi Global WAVES/USDT $ 1.08 $ 109 783 -
Huobi Global WAVES/BTC $ 1.08 $ 35 137 -
Crex24 WAVES/BTC $ 1.09 $ 227 -
Crex24 WAVES/ETH $ 1.10 $ 4 -
50x WAVES/BTC $ 0.99 $ 29 -
50x WAVES/USDT $ 1.03 $ 12 -
CoinDCX WAVES/BTC $ 1.07 $ 7 234 -
CoinDCX WAVES/USDT $ 1.07 $ 1 249 -
HitBTC WAVES/BTC $ 1.07 $ 154 556 -
HitBTC WAVES/USDT $ 1.08 $ 283 -
Beaxy WAVES/BTC $ 1.08 $ 11 -
Bitvavo WAVES/EUR $ 1.08 $ 14 686 -
Binance.US WAVES/USD $ 1.07 $ 30 482 -
Huobi Russia WAVES/BTC $ 1.08 - -
Finexbox WAVES/BTC $ 1.09 $ 7 835 -
Indodax WAVES/IDR $ 1.08 $ 44 220 -
STEX WAVES/BTC $ 1.07 $ 9 685 -
Bithumb WAVES/KRW $ 1.05 $ 137 089 -
Livecoin WAVES/BTC $ 1.08 $ 32 653 -
Bitbns WAVES/INR $ 1.10 $ 22 -
BitRabbit WAVES/USDT $ 1.08 $ 47 159 -
WazirX WAVES/USDT $ 1.08 $ 33 -
Paribu WAVES/TRY $ 1.08 $ 402 396 -
Kuna WAVES/UAH $ 1.05 $ 749 -
Graviex WAVES/BTC $ 1.13 $ 4 -
Coinall WAVES/BTC $ 1.07 - -
Upbit WAVES/KRW $ 1.05 $ 264 862 -
COSS WAVES/ETH $ 1.04 - -
Ihe kachasị mma Waves ọnụego ịzụta nwere ike ọ gaghị adị na dollar, mana iji ego dị iche ma ọ bụ ego ego. Ulo ego egosiputa ego nke enwere ike zụta Waves. E gosipụtara ọnụahịa ire kacha mma Waves n'elu ibe. Waves na-agbanwegharị na dọla US. N’akụkụ ọnụ ahịa ire ahịa nke ego ego ị ga - ahụ ụzọ njikọ n’ahịa mgbanwe nke Waves na - ere kacha mma.
Ọ dị mkpa ịmata ụdị mkpụrụ ego Waves mgbe azụtara ego kachasị mma. Anyị na-egosipụta ozi a n'aka nri nke ọnụego ego ego kacha mma. Mgbanwe crypto kachasị mma maka ire na ịzụ Waves nọ na tebụl ọrụ dị na weebụsaịtị anyị. Jiri nyo nke ego dị iche iche dị na tebụl nke mgbanwe ego ego kachasị mma iji hụ Waves maka ego achọrọ ma ọ bụ ego ego chọrọ. A na-emelite ozi gbasara mgbanwe kacha mma maka ịzụrụ na ire Waves n'ịntanetị ma na-agbanwe agbanwe mgbe niile.